အိန္ဒြာ: သင် အခုတလောကို ဘုံထုတ်ထားလိုက်ပါ။
သင် အခုတလောကို ဘုံထုတ်ထားလိုက်ပါ။
ခုတလောဟာ တဒီးဒီးအော်မြည်ပျံသန်းနေတဲ့ ယင်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ မသဒီဖွယ်ရာ ဆူညံယောက်ရက်ခတ်မှုဖြစ်တယ်။ ခုတလောဟာ ချက်ချင်းပေါက်ချတော့မယ့် မြွေဟောက်တစ်ကောင်လို ပါးပျဉ်း ထောင်နေလိုက်သေးတယ်။ ခုတလောက စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်ပြန်တော့လည်း မျက်လုံး ချင်း မဆုံရဲပြန်ဘူး။
ဘ၀ဆိုတာ ခုတလောတွေရဲ့ တရစပ်ဖြစ်စဉ်ပဲ။ အနည်း ငယ်ဟောင်းနွမ်းသွားသလိုရှိတဲ့ အရင်ခုတလောနဲ့ အခု ခုတလော ဆက်စပ် လိုက်ပုံက အကြားအလပ် မရှိဘူး။
ခုတလောတွေ သွက်သွက်ခါလည်ပတ်နေတယ်။ ခုတလော တွေဟာ ဗလုံး ဗထွေးနိုင်နေတယ်။ ခုတလောတွေ ၀ရုန်းသုန်းကား ဆန်နေတယ်။ ခုတလောတွေဟာ ရှုပ်ထွေး ပွေလီ နေခဲ့တယ်။သေချာတယ် ခုတလောတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာရောင်ဝတ်ဆင် ထားမှန်းမသိတဲ့ ပြသဒါး နေ့များ သာဖြစ်တယ်။
ခုတလောရဲ့ ဧရိယာအကျယ်အ၀န်းက ဘယ်လောက်လဲ။ ခုတလောရဲ့ တည်နေရာ ၊ ခုတလောရဲ့ မြေမျက်နှာ သွင်ပြင်၊ ခုတလောရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ သဘာဝပေါက်ပင်၊ ခုတလောရဲ့ ဒေသအပူချိန်၊ ခုတလောရဲ့ ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း..။
ခုတလောဟာ ခြစ်ခြစ်တောက်ပူတယ်။ ခုတလောဟာ ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်းတယ်။ ခုတလောဟာ လေနီကြမ်းဆင်တယ်။ ခုတလောဟာ လေပြည်နုသွေးတယ်။ ခုတလောဟာ စိတ် ဥတုအတိုင်း အရောင် ပြောင်းတတ်တဲ့ တိမ်ဆိုင်တိမ်လိပ်တွေပါပဲ။
ခုတလောကို အရောင်တစ်ခုခုနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းမယ်ဆိုရင် တိမ်းလွယ်ညွှတ်လွယ်နိုင်လွန်းတဲ့ အဖြူရောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ရော သူများကိုပါ ပေကျံစွန်းထင်းနေစေတဲ့ အနက်ရောင်။ ခုတလောကို အနံ့ နဲ့ နှိုင်းမယ်ဆိုရင် ဒူးရင်းသီးနံ့၊ ခုတလောကို စားစရာနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှအရာသာမရှိပဲ တွင်တွင်ဝါးနေမိခဲ့တဲ့ ချွင်းဂန်းတစ်ခု..။
ခုတလောဟာ စာသားတွေ ဖေါင်းပွလွန်းနေတဲ့ စကားလုံးအမှိုက်ပုံကဗျာတစ်ပုဒ်ဆန်ဆန်ပဲ။ ခုတလော ဟာ ဇာတ်မနာနာအောင် ရေးသားထားတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ဒရမ်မာရုပ်ညွှန်းဆန်ဆန်ပဲ..။ အခုတလောကို အစအဆုံး အထပ်ထပ်ဖတ်နေမိတာတောင် ခုထိ ဇာတ်ရည်မလည်နိုင်သေးဘူး။
ခုတလောဟာစိတ်ဆန္ဒပြပုဒ်ဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ် နာမ၀ိသေသနာ၊ကြိယာဝိသေသနတို့လို ခံစားချက်ဝိသေသန။ ဒီအဆိုပြုချက်ကို ကန့်ကွက်ချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့် သင် ခုတလောဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံး ပြုပြီး အနည်းဆုံး ၀ါကျ ၃ ကြောင်းလောက်တော့ တည်ဆောက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ခုတလော ကျွန်မသည် အလွန်အမင်း လှောင်ပြောင်သရော်ချင်နေခဲ့၏။
အခုတလော ကိုယ့်စကားကိုယ် နားလည်ရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်ချင်စရာ လူတစ်ချို့အကြောင်း ကျွန်မတွေး နေမိခဲ့၏။
ခုတလော ကျွန်မသည် ကျွန်မအပြင်ဖက်ကိုထွက်ပြီး ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဆူပူမန်မဲနေမိပါသည်။
ကျွန်မသည် အခုတလော စိတ်နှင့်ပတ်သက်သော အနာတရာများစွာရရှိခဲ့၏။
ခုတလော ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်တဲ့ သေခြင်းတရားနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဖတ်ပြီး ၊ ခုတလော မိုဃ်းဇော်ရဲ့ ဖတ်လက်စစာအုပ်ကို ပိတ် ခေါင်းရင်းမှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးရင် ကျွန်ုပ်တို့သေလို့ရပြီးကို ရွတ်ဆိုပြီး ၊ ခုတလော အမေ သီချင်းကို ညည်းညူပြီး ၊ ခုတလော ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကိုးကုန်းကိုးကျင်းလျှောက်လည်ပြီး၊ ခုတလော သံဝေဂ သံသယ အစရှိသော အလကားရသည့်တို့ကို တွင်တွင်ယူနေပြီး…….
ခုတလောကို ဘုံထုပ်ပြီး ဖတ်လိုက်တယ်။း)
ခုတစ်လောတွေ အများကြီး တရစပ်ဖြစ်ရာက ကုန်ပဲ မကုန်နိူင်သေးလို့ ခုတစ်လောက စိတ်ညစ်နေမိ....
ဘာရေးရေး သဘောကျး)))
စကားလုံးပြင်းရှရှတွေနဲ့ အဖြစ်မှန်တွေ ဘုံထုတ်ပြထားတဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်သွားတယ် အမ။
I never call u n but sometime miss u so much .
အလည်လာတယ် မကြီးး)
ဖောင်းပွလွန်းတဲံ အမှိုက်ပုံ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဆန်ဆန် ဇာတ်မနာနာအောင်ရေးသားထားသော .........
ခုတလော ခုတလော လာလာ ဖတ်ဖြစ်တယ် ။ ။